Qoyska wiil toogasho ka geystay gobolka Texas oo Warbaahinta la hadlay
Hiiraan Xog, May 20, 2018:- Qoyska arday 17 jir ah oo loo heysto in uu ka dambeeyay toogashadii lagu hoobtay ee ka dhacday iskuul ku yaala gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay la hanfariireen , kuna wareeren wixii dhacay. Waalidka wiilkan da’da yar oo lagu magacaabo Dimitrios ayaa sheegay in uu ahaa wiil caqli badan, degen, iyaguna ay sidoo kale...
Qarax Gaari lagu xeray oo caawa ka dhacay magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, May 19, 2018:- Qarax gaari lagu xeray ayaa caawo ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Sidda ay Warbaahinta u xaqiijiyeen dadka degaanka gaariga Qaraxa lagu xiray ayaa waxaa lahaa Sarkaal ka tirsan ciidamada dowlada Soomaaliyeed. Inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay Qaraxaasi Sarkaalkii gaariga lahaa oo lagu magacaabi jiray Maxamed Adow , waxaana...
Rasiil wasaare Kheyre oo dahfuray Imtaxaanadka Dugsiga Sare
Hiiraan Xog, May 19, 2018:- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa Daah furay Imtixaanaadka Shahaadiga ah ee dalka, oo sanadkaan ay u fariisanayaan 27,600 oo arday. Ra’iisul Wasaaraha oo booqday goobo lagu qaadaayay Imtixaanka ayaa ardayda kula dardaarmay in ay naftooda aaminaan,islamarkaana ay si degan Imtixaanka uga shaqeeyaan,qishkana ay...
AKHRISO:- Maxaa ka jira in Soomaaliya iyo Kenya uu u socdo Wadahadal ku saabsan Muranka Badda Soomaaliya?
Hiiraan Xog, May 19, 2018:- Saacaddihii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo ifbaxday in dowladda Soomaaliya ay dowladda Kenya ay la bilowday Wadahadal ku saabsan Muranka Badda ee ka dhaxeeya Labada dal. Markii hore dowladda Kenya ayaa dhowr jeer ku dhawaaqday in ay doonayso in aan Maxkamad la aadin oo wada hadal hoose lagu dhameeyo Khilaafka Labada dal,laakiin dowladda Soomaaliya...
Afar nin oo isbaaro casri ah dhigtay internetka oo lagu xirey dalka Maraykanka
Hiiraan Xog, May 19, 2018:- Booliiska dalka Maraykanka ayaa dacwado kusoo oogey afar qof ah oo ah mulkiilayaasha bog internetka ah oo la sheegay in dadka lagu baado , loogana qaato lacago sharci daro ah. Boggan ayaa lagu magacaabaa mugshot.com, waxaana la galiyaa sawirrada dadka ay booliiska xiraan, kadibna waxaa lagu rakaateeyaa in ay bixiyaan lacag si sawirka iyo macluumaadkooda...
Madaxweynaha dalka Turkiga oo si kulul uga hadlay arimaha magaalada Qudus
Hiiraan Xog, May 19, 2018:- Madaxwaynaha dalka Turkiga Erdagon oo khudbad Muslimiinta Dunida ku Nool ka Farxisay Jeediyey Waxay udhigan tahay Sidan “Waxaan si toos ah ugu digayaa Trump iyo mareynka. waxaa u fiican in aysan faraha lasoo galin arimaha Qudus. Waxa ay ku sheegeen Jaresusalam inagu waxaan u naqaan magalada Qudus” “Masjid Al Aqsa waa diilinta gaduudan...
Booliiska oo toogtay nin hubeysan oo galay goob uu madaxweyne Trump uu leeyahay
Hiiraan Xog, May 19, 2018:- Booliiska gobolka Florida ayaa toogtay, kadibna dhaawacay nin hubeysan oo la sheegay in uu galay goob uu leeyahay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, oo ku taala magaalada Miami. Ninkan oo magaciisa lagu sheegay Jonathan Oddi, oo ah 42 jir ayaa loo qaaday isbitaalka kadib markii ay rasaas is weeydaarsadeen booliiska isaga oo ku sugnaa goobta...
Hiiraan Xog, May 18, 2018:- Madaxweyne Waare Oo Walaac Ka Muujiyay Cuduro Ka Dhasha Fatahaada Hirshabelle Saameysay Madaxweyne Dowladda Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare Oo Soo gaba gabeeyay Safarkiisa Beydhabo kaddib Markii uu halkaasi kaga Soo Qeyb galay Shirka Golaha Iskaashiga Maamul Goboleedyada, ayaa Maanta Soo Gaaray Magaalada Muqdisho, iyadoo Garoonka Diyaaradaha...
Hiiraan Xog, May 18, 2018:- Madaxweyne Donald Trump ayaa iskudayay in sidiisii uu ku soo celiyo shirka uu la yeelanayo Kim Jong Un, isagoo u ballan qaaday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi inuu helayo ammaan haddii uu isaga haro hubka nukliyeerka ah. 2003, hogaamiyihii Liibiya, Mucamar Qaddaafi, ayaa waxa uu ogolaaday inuu isaga joojiyo barnaamijkii nukliyeerka ee uu waday...